Who are they?: ချောက်ရေနံမြေမှ အထွေထွေမာန်နေဂျာ. (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ဝင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာနမှ စာရေးမ ဒေါ်မြမြသိန်း တို့ရဲ့လိမ်လည်မှု...
ချောက်ရေနံမြေမှ အထွေထွေမာန်နေဂျာ. (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ဝင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာနမှ စာရေးမ ဒေါ်မြမြသိန်း တို့ရဲ့လိမ်လည်မှု...
.ministry of energy myanmar
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဋ္ဌာန ချောက်ရေနံမြေမှာရှိတဲ့ .. မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းဋ္ဌာနမှ အထွေထွေမာန်နေဂျာ. (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီးကျာ်ဝင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာနမှ စာရေးမ ဒေါ်မြမြသိန်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ တောင်သူတွေကို လိမ်လှည် လှည့်ဖျားပြီး ငွေတွေ ယူသွားတဲ့အကြောင်း ရေးသား ပေးပို့လာတာကို ပြန်လည် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ချောက်ရေနံမြေရဲ့ မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းဋ္ဌာနမှ အကြီးဆုံးတာဝန်ရှိသူဖြစ်တဲ့ အထွေထွေမာန်နေဂျာ. (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီး ကျော်ဝင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဋ္ဌာနမှ စာရေးမ ဒေါ်မြမြသိန်းတို့ နှစ်ဦးပေါင်းပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှာ အလုပ်သမားတွေ လိုအပ်တယ်... အလုပ်ခန့်မယ်။ မိန်ကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ဖြစ် ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်မယ်.... ဆိုပြီး.... အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ရှိတဲ့ တောင်သူများအား အထွေထွေမာန်နေဂျာ (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ဝင်းမှ ဒေါ်မြမြသိန်းအား လိုက်လံ စည်းရုံးခိုင်းပါတယ်။ တလလစာငွေ ၈သောင်းနဲ့ ၁သိန်းကြားမှာ..ရမယ်.... အထွေထွေ မာန်နေဂျာမှ ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ပေးမယ့် အတွက်ကြောင့် တစ်ဦးကို ၅သိန်းပေးရမယ်။ ဝန်ကြီးနဲ့ လူကြီးတွေကို ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်မြမြသိန်းမှ ယုံကြည်အောင် လိုက်လံ စည်းရုံးပါတယ်။
မသိနားမလည်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ ရွာသူရွာသား (၆)ဦးမှ ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင် လာရောက်စည်းရုံးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ယုံကြည်ပြီး နှမ်းတွေရောင်း၊ ပဲတွေရောင်း၊ ယာတွေရောင်းပြီး ရှိစုမယ့်စု ငွေ(၅)သိန်းစီကို ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရမယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပေးအပ်လိုက်ကြပါတယ်။ နေ့ရွှေ့၊ ညရွှေ့ အလုပ်လဲမရ အချိန်တွေ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဘာသတင်းမှ မကြားရတဲ့ အတွက် ငွေပေးထားတဲ့ တောင်သူ (၆)ဦးမှ မြို့ပေါ်တက်ပြီး အလုပ်ရမရ မေးမြန်း စုံစမ်းရာမှာ ထို(ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီးကျော်ဝင်းနဲ့ စာရေးမမြမြသိန်းတို့မှ မောက်မာရိုင်းစိုင်းစိုင်း စကားများဖြင့် ဆဲရေးတိုင်းတာပြီး မောင်းထုတ်ပါတယ်။ တောင်သူတွေမှာ ရှိစုမယ့်စု ငွေလည်းဆုံးရှုံး ၊ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းလည်း ပြောခံရ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်ချင်ပေမယ့်လည်း (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီးဆိုတဲ့ အရှိန်အဝါနဲ့ ယူနီဖောင်းကို ကြောက်ရွံပြီး တရားစွဲဖို့လည်းမလွယ် ... မြို့ပေါ်တစ်ခေါက် တစ်ခေါက်တက်ဖို့လည်း စားရိတ်စားက မတတ်နိုင် ဖြစ်နေကြောင်း.. ဆုံးရှုံးသွားတယ့် ငွေအတွက်ကော ..နောက်လူတွေလည်း ဒီလိုအဖြစ်မခံရအောင် အသိပေးစေလိုကြောင်း. ... ယခုအဖြစ်အပျက်ကို သက်ဆိုင်ရာမှ မေးမြန်းစုံစမ်း ဖြေရှင်းပေးစေလိုကြောင်း လိမ်လည်ခံရသူ တောင်သူများမှ အရှင်ဓမ္မရာဇာမှ တစ်ဆင့် ရေးသားပေးပို့လာပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 5:12 PM
June 9, 2010 at 12:51 PM
လူလိမ္မာ နှင့် လူမိုက်
"လူမိုက် ဖြစ်ပါလျက် မိမိလူမိုက် ဖြစ်ကြောင်းကိုသိ၏။
ထိုသို့ သိခြင်းကြောင့်ပင် ထိုသူကို ပညာရှိဟုဆိုရ၏။
လူမိုက် ဖြစ်ပါလျက် မိမိကိုယ်ကို ပညာရှိ ဟုထင်၏။
ထိုသူသည်ဟာ တကယ့် လူမိုက် စစ်စစ်ဖြစ်၏"
ဓမ္မပဒ၊ စာလတ်၊ ဂါထာ ၆၃
ဂုဏ်ပြု တေး (1)
ဒေါ်စုပုံ ခြေထောက်နဲ့ ကန်တဲ့လောက်ကောင်
ချောက်ရေနံမြေမှ အထွေထွေမာန်နေဂျာ. (ဒု)ဗိုလ်မှုးကြီး...
Myanmar8888( Sit Tyun Ma Khan Kyut Daung Alan) -1
သင့်နံမည် နှင့် သင့်လုပ်ရပ်သည် သမိုင်းစာမျက်နှာတွင်ကျန်ရစ်ပါသည်။ သင်သေသော်ငြား..လူအများသိကြရမည်။ သင်ဘယ်လိုလူဆိုတာသည် ..? မြို့တော်ခန်းမရှေ့ တွင်အကြမ်းဖက်သူများ ၁။ ဦးမင်းထွတ် (၄၅)နှစ် ကျောက်တံတားမြို့ စွမ်းအားရှင် ၂။.ဦးနိုင်တင့်ခိုင် (၄၁)နှစ် သိမ်ကြီးဈေးရှေ့့တွင်အကြမ်းဖက်သူများ ၁။ ဦးအောင်မင်းသိမ်း (၄၀)နှစ် ပန်းပဲတန်းမြို့ စွမ်းအားရှင် ၂။.ဦးခင်လတ် (၄၄)နှစ် လှိုင်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်သူများ ၁။ ဦးဇော်ဇော် (၃၉)နှစ် လှိုင်မြို့ စွမ်းအားရှင် ၂။ ကိုမျိုးမင်းလတ် လှည်းတန်းတွင်စုစုနွေးနှင့်အဖွဲ့ အားအကြမ်းဖက်သူများ ၁။ ဦးမော်မော်ဦး (၃၀)နှစ် ကမာရွတ်မြို့ စွမ်းအားရှင် ၂။ ဦးခင်မောင်ဦး (၄၃)နှစ် DVB မှကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
တော်လှန်ရေး မျိုးဆက်သစ်များ မွေးဖွားသန့် စင်ခြင်း
- သင်သည် နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးပါသလား။
- အမျိုးဘာသာ သာသနာကို..အမိမြေတွင် တည်တံ့လို ပါသ လား။
- အနာဂတ်မဲ့ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသော မျိုးဆက်သစ်ကလေး များ၏ ဘ၀ကို လှပ စေလိုပါ သလား။
- လူသားပီပီသသ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးတို့ ကို ရရှိပိုင်ခွင့် လို လား ပါ သလား
- မုဒိန်းကျင့်ခံ အမျိုးသမီးကလေးများ၏ ဘ၀ကို စာနာတတ်ပါ သလား။
-မြေကြီးမှ ရွှေသီးခဲ့သော ဘိုးဘွား အမွေကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်း ပေးလိုပါသလား။
ဤအချက်များ သင့်တွင်ပြည့်စုံပါက သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် တသွေးတသားထည်းရှိပါသည်။ ကမ်းလက်များဖြင့် ဆီးကြိုပါသည်။ ဝင်လာခဲ့ပါ ခင်ဗျာ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အား ပြန်လွှတ်ပေးရန် မြန်မာပြည်သားများနှင့် အတူတောင်းဆိုလိုက်သည်
လမ်းလျောက်ချင်ရင် ဒီမှာ.. ငြိမ်းချမ်းစွာ..လမ်းလျှောက်ကြရအောင်.. စိတ်ဓါတ်
လွတ်လပ်စွာ..အမှန်သိချင်ရင်.ဒီမှာလာဖတ် ကလိုစေးထူး ကိုဈန်.. ကိုဇင် ကိုထိုက် ကိုဖိုးဇေ ကိုရင် ကဒေါင်းညင်သာ ခင်မင်းဇော် ဂျစ်တူး စိတ်ဓါတ် ဆုံစည်းရာ ဇော်ဘားမား ဒီတော့...ဘာဖြစ်လည်း.. ဒေါင်းကွင်းမှ..ဒေါင်း နစ်နေမန်း နှင်းခါးမိုး ပုထုဇဉ် မဖြူဖြူသင်း ဘယ်ညာညီညီလှမ်း..ပန်းတိုင်လမ်းသို့ဘုန်းဘုန်း မသဒ္ဓါ လင်းလက်ကြယ်စင် သင့်ကင်း လွတ်လပ်စေမည်..အမိမြန်ပြည် လူသစ် အမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ မေငြိမ်း မျိုးဆက်အမှတ် (၅) သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ သီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ ၉၆ မျိုးဆက်များ အိမ်မက်အိမ်ကလေး အရှင်မေတ္တာစာရ
သန်းရွှေဦးစီးသည့် အာဏာရူးတို့အား စုစည်းညီညာစွာ တွန်းလှန်၍ ပြည်သူ့ရွေးကောက်တင်မြောက်သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျသော ပါတီစုံစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေ ရေး အတွက် နိုင်ငံသားအများစုမှ အမြန်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်းလက်တွဲကာ ဖော်ဆောင်ကြ။
Daw Peral (IVY fashion shop owner) , Studio Ivy (formally Seoul Studio). Inya Road.
Kaye Thu Naing, No.17,Panchan Street.1 st Floor, San Taung Qtr.(Ma.Ya.Ka)
Mar Lar Win ,wife of DG Col Aung Myo Myint,Myanma Film enterprise.
U Htoo,Building No;264,Room 12,East YAnkin, USDA member.
ကိုအောင်ကြီး။ (ကြံ့ဖွတ်) အောင်နိုင်ငံခြား ဘာသာသင်ကျောင်း။ရန်ကင်း။ရန်ကုန်။
ကိုမောင်မောင်။ ကြံဖွတ်။ ၁၄၇ လမ်း။
စိုးဝင်း ကျောက်တံတား မြို့ နယ်အတွင်းရေးမှူး
စန္ဒာဆွေ (တေဇ၏အမကြီး..Eco from around 1976-1979)
ဘချစ်။ ရန်ကင်းကြံဖွတ်အဖွဲ့ ဝင်
ရဲကျော်သူရွှေ ။ နေရပ်..ရွှေဂုံတိုင်၊..(၀၉၅၀၀၁၅၅၁)
သံချောင်း။၂၈ လမ်း အလယ်လမ်း။ ပန်းဘဲတန်း ၄ ရပ်ကွက်။
ဦးသက်ရှေထူး၊ ကျောက်တံတား မြို့ တယ်ကြံ့ ဖွတ်မြို့ နယ်စည်းရုံးရေးမှူး ( ဖုန်း က ၃၇၄၁၁၄ ) အိမ်လိပ်စာ အမှတ် ၁၈၀ ဆူးလေဘုရားလမ်း ။
ဦးကျော်သူရ ။ (အလုံမြို့နယ် ကြံ့ခိုင်ရေး အတွင်းရေးမှုး) ဆင်ရေကန်လမ်း ဆင်မင်းရပ်ကွက် အလုံမြို့နယ်
ဌေးဦး၊ ကျောက်တံတား မြို့ နယ် စည်းရုံးရေးမှူး၊ နေရပ် ဆူးလေဘုရားလမ်း ဆာကူရာတာဝါဘေး
ဒေါက်တာအောင်မြတ်စိုး .မျက်စေ့အထူးကုဆရာဝန် ။ (ဗိုလ်ချုပ်မြငိ့အောင်၏သားမက်)။ မေတ္တာဦးဆေးခန်း ။ရန်ကုန်။
ရွှေတိုး ၊လမ်းမတော် ၁၀ လမ်းကြံ့ဖွတ်စည်းရုံးရေးဝင်
၀င်းထွန်း ( ဒုရဲအုပ် ) ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်
၀င်းအောင်ကျော်.။ ကြံ့ဖွံ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရေးမှုး....စမ်းချောင်းမင်္ဂလာလမ်း။ အာအိုင်တီ ဓါတုဗေဒ ကျောင်းသားဟောင်း